N'ogbe sodium Gluconate ụlọ ọrụ na-emepụta | Gaoqiang
Sodium Gluconate a na-akpọkwa D-Gluconic Acid, Monosodium Nnu bụ nnu sodium nke gluconic acid ma mepụta ya site na gbaa ụka. Ọ bụ ọcha granular, kristal siri ike / ntụ ntụ nke bụ ezigbo soluble na mmiri.
Sodium Gluconate a na-akpọkwa D-Gluconic Acid, Monosodium Nnu bụ nnu sodium nke gluconic acid ma mepụta ya site na gbaa ụka. Ọ bụ ọcha granular, kristal siri ike / ntụ ntụ nke bụ ezigbo soluble na mmiri. Ọ bụ ihe na-adịghị emebi emebi, nke na-adịghị egbu egbu, nke nwere ike ịgbanwe na nke emere maka mmeghari ọ bụla. Akụ akụrụngwa nke sodium gluconate bụ ike magburu onwe ya nke kachasị, ọkachasị na ngwakọta alkaline na nke alkaline. Ọ na-etinyere igwe na-edozi ahụ site na calcium, iron, ọla kọpa, aluminom na ọla ndị ọzọ dị arọ. Ọ bụ ihe na - eme ka mmadụ cheta ya karịa EDTA, NTA na phosphonates.
Ihe na nkọwa
White crystalline ahụ / ntụ ntụ
Kwụsị na ihicha
1. Industrylọ Ọrụ Nri: Sodium gluconate na-arụ ọrụ dịka onye na-eme ka ihe sie ike, ihe na-eme ya na ihe ndozi mgbe ejiri ya mee ihe.
2. industrylọ ọrụ ọgwụ: Na ngalaba ahụike, ọ nwere ike idobe acid na alkali na ahụ mmadụ, ma nwetaghachị ọrụ akwara. Enwere ike iji ya na mgbochi na ọgwụgwọ ọrịa maka obere sodium.
3. Ngosiputa Ngwa & Ihe Nlekọta Onwe: A na-eji sodium gluconate mee ihe dị ka onye na-echekwa ihe iji mepụta ogige ndị nwere ion ọla nwere ike imetụta nkwụsi ike na ọdịdị nke ngwaahịa ịchọ mma. Gluconates na-agbakwunye na ndị na-ehicha ihe na shampoos iji mee ka akwa ahụ dịkwuo elu site na ịmịnye ion mmiri siri ike. A na-ejikwa gluconates eme ihe na ọnụ na nlekọta anụ ahụ dị ka ncha ezé ebe a na-eji ya eme ka calcium belata ma na-enyere aka igbochi gingivitis.
4. Nhicha Mmeputa: Sodium gluconate a na-ejikarị eme ihe n'ọtụtụ nhicha ụlọ, dị ka efere, akwa, wdg.
Ngwugwu & Nchekwa:
Ngwugwu:Akpa rọba 25kg nwere eriri liner. Enwere ike ịnweta ngwugwu ọzọ na arịrịọ.
Nchekwa:Oge ndụ bụ afọ 2 ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dị jụụ, ebe a mịrị amị. Ule kwesiri ime mgbe emechara ya.
Nke gara aga: Cellulose Ether HPMC maka plasta / Concrete / Grout dị ka Onye Na-echekwa Mmiri
Osote: Polycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG
Ngwakọta Sodium Gluconate Chelating Agent
Sodium Gluconate Ihe Mkpokọta
Gluconate Sodium Na Nri
Gluconate Sodium Na Ncha